Ixesha kunye nabahlobo 8
Ingaba iKrismesi inencazelo ethile kwi-theosophist, kwaye ukuba kunjalo, yintoni?
Intsingiselo yokuba iKrisimesi inesosophist ixhomekeke kakhulu kubuhlanga okanye kwinkolo yakhe. I-Theosophists ayixolelwa kumkhethe, zisenokubulala. I-Theosophists, oko kukuthi, amalungu e-Theosophical Society, avela kuzo zonke izizwe, ubuhlanga kunye nenkolelo. Kuya kuthi ke kuxhomekeka ngandlel 'ithile malunga nokuba ukhetha luphi na uhlobo lokucinga. Bambalwa abantu, nangona kunjalo, izimvo zabo zingabanzi ngokuqonda kweemfundiso ze-theosophical. UmHebhere uyamqonda uKristu kunye neKrisimesi ngokhanyo olwahluke kakhulu kunangaphambili waba yingcali yemosos. Unjalo ke nomkristu, kunye nabo bonke abanye bohlanga kunye nesivumokholo. Intsingiselo ethile eqhotyoshelwe kwiKrisimesi ngumthiyori yinto yokuba uKrestu ngumgaqo hayi umntu, umgaqo osikhulula ingqondo ekukhohlisweni okukhulu kokwahlukana, usondeza umntu kufutshane nemiphefumlo yabantu kwaye umdibanise kumgaqo-siseko Uthando lobuthixo kunye nobulumko. Ilanga ngumqondiso wokukhanya okuyinyani. Ilanga lidlulela kumqondiso we-capricorn ngomhla we-21st kaDisemba ekupheleni kwekhosi yakhe yasemazantsi. Ke ziintsuku ezintathu xa kungekho bunyani kubude bawo kwaye ngolwesi 25th kaDisemba ilanga liqala ikhosi yakhe yasemantla kwaye ke kuthiwa lizelwe. Abantu bakudala babhiyozela lo msitho ngeminyhadala nangovuyo, besazi ukuba ngokufika kwelanga ubusika buza kudlula, iimbewu zidlakudwe yimitha yokuKhanya kwaye umhlaba phantsi kwempembelelo yelanga uya kuvelisa isiqhamo. I-theosophist ithatha iKrisimesi kwizinto ezininzi ezizimeleyo: njengokuzalwa kwelanga kwilitye lesibonakaliso, eliza kusebenza kwilizwe lenyama; kwelinye icala nakwinyani yokuzalwa kukuzalwa kwelanga elingabonakaliyo, uMgaqo kaKristu. U-Kristu, njengomgaqo, kufuneka azalwe Ngaphakathi Umntu, apho umntu asindiswe kwisono sokungazi okuzisa ukufa, kwaye ufanele ukuba aqale ixesha lobomi elikhokelela ekungafini kwakhe.
Ngaba kunokwenzeka ukuba uYesu wayengumuntu ongokoqobo, kwaye wazalwa ngosuku lweKrisimesi?
Kuyenzeka ukuba kuvele omnye, nokuba igama lakhe nguYesu okanye nguApolonius, okanye elinye igama. Inyani yobukho kwihlabathi lezigidi zabantu abazibiza ngokuba bangamaKristu iyangqina le nto, ukuba kumele ukuba kukho umntu owafundisa iinyaniso ezinkulu-umzekelo, ezo kwiNtshumayelo yaseNtabeni — ebizwa ngokuba bubuKhristu imfundiso.
Ukuba uYesu wayengumntu wokwenene kutheni singabi nalinye irekhodi lembali yokuzalwa okanye ubomi bomntu onjalo kunokuba isitatimende seBhayibhile?
Kuyinyani ukuba asinayo ingxelo eyimbali yokuzalwa kukaYesu okanye yobomi bakhe. Kwanengxelo yeJosephus kuYesu kuthiwa ngabasemagunyeni babeyintsingiselo. Ukungabikho kwengxelo enjalo kubaluleke kakhulu xa kuthelekiswa nenyani yokuba iseti yeemfundiso zahlulwe zajikeleza umlinganiswa, nokuba ngaba ayisiyantlonelo okanye lolokwenyani. Iimfundiso zikhoyo kwaye zezinye zeenkolo ezinkulu zehlabathi ezinobungqina kumlingiswa. Owona nyaka awazalwa ngawo uYesu, nkqu kwezona nkolo zinkulu zinokuthetha ngokuqinisekileyo. “Abasemagunyeni” abaphikisani. Abanye bathi ngaphambili kuka-AD 1; abanye bathi kwakusebusuku njenge-AD 6. Ngaphandle kwabasemagunyeni abantu bayaqhubeka ukubambelela kwixesha elamkelwa kwikhalenda kaJulian. Kusenokwenzeka ukuba uYesu wayengumntu wokwenene kwaye engaziwa ngabantu xa bebonke, ngexesha lokuphila kwakhe. Unokwenzeka kukuba uYesu wayengutitshala owayalela inani labo baba ngabafundi bakhe, abathi abafundi bakhe bakufumana ukufundisa kwakhe, washumayela ke iimfundiso zakhe. Abafundisi-ntsapho bahlala beza phakathi kwamadoda, kodwa kunqabile ukuba baziwa emhlabeni. Banyula abona bafaneleke kakhulu ukufumana iimfundiso ezindala kwaye babayalele, kodwa bengahambi baye elizweni kwaye bayale. Ukuba bekunjalo ngoYesu kuya kubagweba ababhali-mbali belo xesha bengazi ngaye.
Kutheni bebiza oku, i-25th kaDisemba, iKrisimesi esikhundleni se-Jesusmass okanye uYesu ngosuku, okanye ngamanye amagama?
Kude kube ngenkulungwane yesine okanye yesihlanu yaba sisihloko esithi iKrisimesi yanikwa iminyhadala eyayisenziwa nge25th kaDisemba. IKrisimesi ithetha ubunzima bukaKristu, ubunzima obugcinelwe, okanye, okanye kuKristu. Ke elona gama lichanekileyo liya kuba ngu-Yesu-nzima, kuba iinkonzo ezaziqhutywa kunye neminyhadala ebizwa ngokuba "sisininzi" ezazisenziwa kusasa kwe-25th kaDisemba yayikuYesu, usana oluzelweyo. Oku kwalandelwa yimincili yabantu, etshise ilogu ye-Yule ngembeko yomthombo womlilo kunye nokukhanya; Ngubani ohambisa iplamu, ebethe iziqholo kunye nezipho eziziswe zizilumko ezivela eMpuma kuYesu; Ngubani ogqithe kwisitya sokusila (kwaye ebehlala enxila ngenxa yoko) njengophawu lomgaqo onika ubomi ovela elangeni, obuthembisa ngokuqhekeka komkhenkce, ukuqukuqela kwemilambo, kunye nokuqala kokuntywila emithini entwasahlobo. Umthi weKrisimesi kunye namagqabi asetyenziswa njengesithembiso sokuhlaziywa kwesityalo, kwaye izipho bezitshintshana, zibonisa imvakalelo elungileyo ekhoyo phakathi kwabo bonke.
Ngaba kukho indlela yokuqonda ukuzalwa nokuphila kukaYesu?
Kukho, kwaye iya kubonakala njengeyona ingqiqweni kakhulu kunoma ngubani oya kuyithatha ngaphandle kokukhetha. Ukuzalwa, ubomi, ukubethelelwa emnqamlezweni, kunye nokuvuka kukaYesu zibonisa inkqubo eza kudlula kuyo yonke imiphefumlo engena ebomini kwaye ngubani okhoyo kubomi bokungafi. Iimfundiso zecawe emalunga nembali kaYesu zikhokelela kude nenyaniso ngaye. Unikwe utoliko lwefosophical webali lebhayibhile. UMariya ngumzimba wenyama. Igama elithi uMariya liyafana kwiinkqubo ezininzi zonqulo ezinkulu, abathi babangoThixo njengabasunguli bazo. Igama livela eMara, Mare, Mari, kwaye konke oku kuthetha ukukrakra, ulwandle, isiphithiphithi, ubuqhetseba obukhulu. Unjalo wonke umzimba womntu. Isiko phakathi kwamaYuda ngelo xesha, kwaye abanye basabambe nanamhlanje, yayikukuba uMesiya wayeya kuza. Kwathethwa ukuba uMesiya wayeya kuzalwa yintombi enyulu ngendlela engathethekiyo. Oku akukho ngqiqweni ngokokubona kwezinto zesini, kodwa kugcinwe ngokugqibeleleyo iinyani ze-esoteric. Inyani yile yokuba xa umzimba womntu uqeqeshelwe ngokufanelekileyo kwaye ukhula uba nyulu, ungazani nandoda, unyulu, ungavakali Xa umzimba womntu sele ufikelele kwinqanaba lokusulungeka kwaye ucocekile, kuthiwe nguMariya, ntombi enyulu, kwaye ulungele ukukhulelwa ngokungaqhelekanga. Ukuqonda okungamanyala kuthetha ukuba uthixo wakhe, umntu wobuThixo, oqinisa umzimba oye waba yintombi nto. Olu luqilima okanye le ngqondo iqulathe ukukhanyiselwa kwengqondo, okuyiyo eyokwenyani yokuqala yokwenyani yokungafi kunye nobuThixo. Oku akuqhelekanga, kodwa kuyinto yokoqobo. Kuyinyani ngokoqobo. Ukucoceka komzimba ogciniweyo, kuqala ubomi obutsha ngaphakathi kolo hlobo lomntu. Obu bomi butsha bukhula ngokuthe ngcembe, kwaye kwabizwa uhlobo olutsha. wakhulelwa nguMoya oyiNgcwele, ukukhanya kwe-ego, kwaye wazalwa yintombi enguMariya, umzimba wayo wenyama. Njengoko uYesu wayedlula kwiminyaka yakhe yokuqala ebumnyameni, kufuneka ukuba ibe yinto engacacanga kangako. Lo ngumzimba kaYesu, okanye oza kusindisa. Lo mzimba, umzimba kaYesu, ngumzimba ongafiyo. UYesu kuthiwa weza kusindisa umhlaba. Wenza njalo ke. Umzimba kaYesu awufi ngokwenyama, kwaye loo nto yayiqaphelekile ngokwenyama idluliselwa kumzimba omtsha, umzimba kaYesu, osindayo ekufeni. Umzimba kaYesu awufi kwaye ngubani na ofumene uYesu, okanye lowo uYesu eze ngaye, akasaphumli okanye anezikhala kwimemori, njengoko esazi njalo phantsi kwazo zonke iimeko neemeko. Akaphumli kwimemori imini, ubusuku, ukufa, kunye nobomi bexesha elizayo.
Wathetha ngoKristu njengomgaqo. Ngaba wenza umehluko phakathi kukaYesu noKristu?
Kukho umahluko phakathi kwala magama mabini kunye nezo zenzelwe ukumelwa. Igama elithi “Yesu” lalidla ngokusetyenziswa njengesihlonipho sembeko kwaye linikwe kulowo bekufanele. Sibonisile ukuba yintoni intsingiselo ka-Esoteric kaYesu. Ngoku igama "Christ," livela kwigama lesiGrike elithi "Chrestos," okanye "Christos." Kukho umahluko phakathi kweChrestos noChristos. I-Chrestos yayiyimpazamo okanye umfundi owayekwicala lokwexeshana, kwaye xa wayelilingo, elungiselela ukubethelelwa kwakhe ngokomfuziselo, wabizwa ngokuba yiChrestos. Emva kokuqalisa wathanjiswa wabizwa ngokuba nguChristos, umthanjiswa. Ke umntu oye waphumelela kuzo zonke izilingo kunye nokuqalwa kwaye wafumana ulwazi malunga nomanyano kunye noThixo wabizwa ngokuba "ngu" okanye "u-Christos." Oku kusebenza kumntu ofikelela umgaqo-siseko kaKristu; kodwa u-Christos okanye u-Christos ngaphandle kwenqaku eliqinisekileyo ngumgaqo ka-Kristu kwaye hayi nawuphi na umntu. Ngokuhambelana nesihloko esithi Yesu, uKrestu, kuthetha ukuba umgaqo-siseko awayewusebenza ngokusebenza nomzimba kaYesu, kwaye umzimba kaYesu ubizwa ngokuba nguYesu ngu-Kristu ukubonisa ukuba lowo ungongenakufa ngokuba umzimba kaYesu wayengengomntu nje ongafiyo, kodwa ukuba wayenemfesane, enobuthixo, enguThixo. Ngokubhekisele kuYesu okwimbali, siyakukhumbula ukuba uYesu akazange abizwe ngokuba ngu-Krestu de wayebhaptizwe. Xa wayenyuka emlanjeni iYordan kuthiwa umoya wehla phezu kwakhe kwaye izwi liphuma ezulwini lisithi: “Lo ngunyana wam oyintanda, endikholisiweyo nguye.” Ke emva koko kwathiwa nguYesu nguYesu, okanye UKrestu Yesu, ngaloo ndlela kuthetha ukuba umntu-uthixo okanye uthixo-umntu. Nawuphi na umntu unokuba nguKristu ngokuzimanya kumgaqo ka-Kristu, kodwa ngaphambi kokuba kwenzeke umanyano kufanele ukuba wayezalwe ngokutsha. Ukusebenzisa amazwi kaYesu, "Nimelwe ukuzalwa ngokutsha ngaphambi kokuba nibudle ilifa ubukumkani bamazulu." Oku kuthetha ukuba, umzimba wakhe awuzange uphinde ucenge usana, kodwa ukuba, njengomntu, kufuneka azalwe ngokutsha. njengomntu ongafiyo ovela emzimbeni okanye emzimbeni wakhe, kwaye olo luzalo luya kuba kukuzalwa kukaYesu, uYesu wakhe. Ke kuphela kwakuba kunokwenzeka ukuba abudle ilifa uBukumkani bamazulu, kuba nangona kunokwenzeka ukuba uYesu abunjwe ngaphakathi emzimbeni wentombi, akunakwenzeka ukuba umgaqo kaKristu wenziwe nje, njengoko ususwe kude kakhulu inyama kwaye idinga umzimba oguqulwe ngakumbi okanye ophucukileyo ukubonakalisa ngokusebenzisa. Kuyimfuneko ke ukuba umzimba ongafiyo ubizwe nguYesu okanye ngalo naliphi na elinye igama eliqulunqwe phambi kukaKristu njengoko uLogos, uLizwi, enokubonakaliswa emntwini. Kuya kukhunjulwa ukuba uPawulos wabongoza abo asebenza nabo okanye abafundi ukuba basebenze kwaye bathandaze de uKrestu abumbeke ngaphakathi kubo.
Sisiphi isizathu esithile sokubhiyozela usuku lwe-25th kaDisemba njengaloo kuzalwa kukaYesu?
Isizathu kukuba lixesha lendalo kwaye linokubhiyozelwa nangaliphi na elinye ixesha; kuba nokuba ithathwe kwimo yeenkwenkwezi, okanye njengokuzalwa komzimba womzimba womntu, okanye njengokuzalwa komzimba ongafiyo, umhla kufuneka ube ngomhla we-25th kaDisemba, okanye xa ilanga lingena kwi-capricorn yomqondiso. Abantu bakudala bayazi kakuhle le nto, kwaye babhiyozela imihla yokuzalwa kwabo basindisa okanye malunga ne-25th kaDisemba. AmaYiputa abhiyozela umhla wokuzalwa kweHorus yawo ngomhla we-25th kaDisemba; AmaPersi abhiyozela usuku lokuzalwa lweMithras yawo ngomhla we-25th kaDisemba; amaRoma abhiyozela uSaturnalia, okanye iminyaka yegolide, ngomhla we-25th kaDisemba, kwaye ngalo mhla ilanga lazalwa kwaye wayengunyana welanga elingabonakaliyo; okanye, njengoko besitsho, "die natalis, invicti, solis." okanye umhla wokuzalwa kwelanga elingenakunqandwa. Ubudlelwane bukaYesu no-Kristu baziwa ngembali yakhe etyholwa kunye nento eyenzeka elangeni, kuba yena, uYesu, uzalwe nge-25th kaDisemba, olusuku apho ilanga liqala uhambo lwasenyakatho kumqondiso we-capricorn, ukuqala zokukhanya kwelanga ebusika; kodwa ayikoku de ayigqithise i-vernal equinox kumqondiso we-aries apho kuthiwa ufumana amandla kunye namandla. Ke izizwe zamandulo zaziza kuvuma iingoma zazo zovuyo nokudumisa. Kungeli xesha lokuba uYesu abe nguKristu. Uvusiwe kwabafileyo kwaye ubumbene nothixo wakhe. Esi sisizathu sokuba sibhiyozele umhla wokuzalwa kukaYesu, kwaye kutheni “abahedeni” bebhiyozela umhla wokuzalwa kwabo thixo babo ngomhla we-25th kaDisemba.
Ukuba kunokwenzeka ukuba umntu abe nguKrestu, kufezekiswa njani kwaye idibana njani ne-25th ngomhla kaDisemba?
Umntu othile okhuliswe kwikhaya lobuKristu obuqhelekileyo intetho enjalo inokubonakala ngathi ingcwele; kumfundi owazi inkolo nentanda-bulumko ayizukubonakala ngathi ayinakwenzeka; kwaye izazinzulu, ubuncinci kuzo zonke, kufuneka zikuthathe njengento engenakwenzeka, kuba ngumbandela wokuzivelela kwezinto. Ukuzalwa kukaYesu, ukuzalwa kwesibini, kudibene ne25th kaDisemba ngenxa yezizathu ezininzi, phakathi kwazo apho umzimba womntu wakhelwe kumgaqo-siseko ofanayo nowomhlaba kwaye uhambelana nemithetho efanayo. Zombini umhlaba kunye nomzimba ziyahambelana nemithetho yelanga. Ngomhla we-25th ka-Disemba, okanye xa ilanga lingena kumqondiso we-capricorn, umzimba womntu, ukubonelela ukuba udlulile kulo lonke uqeqesho lwangaphambili kunye nophuhliso, ulungele ngokufanelekileyo umsitho ukuba wenzeke. Amalungiselelo angaphambili afunekayo kukuba ubomi bumsulwa obugqibeleleyo bufanele baphile, kwaye ingqondo kufuneka iqeqesheke kakuhle kwaye inesakhono, kwaye bakwazi ukuqhubeka nawo nawuphi na umgca womsebenzi ngalo naliphi na ixesha elide. Ubomi obucocekileyo, umzimba ovakalayo, inkanuko ezilawulwayo kunye nengqondo eyomeleleyo zenza ukuba loo nto yayibizwa ngokuba yimbewu kaKristu ukuba ithathe ingcambu yomhlaba wentombi, naphakathi komzimba wokwakha umzimba wangaphakathi we-esreal -mvelo yendalo. Apho kwenziwe khona iinkqubo ezifanelekileyo zadlula. Ixesha lafika, umsitho wenzeka, kwaye okokuqala ngqa umzimba ongafiyo okwakudala ixesha elide ukhula ngaphakathi komzimba wenyama uphume emzimbeni kwaye wazalwa ngawo. Lo mzimba, ubizwa ngokuba ngumzimba kaYesu, awungomzimba we-astral okanye i-linga sharira ekuthethwe ngayo ngoososophists, nokuba ayinguwuphi na omnye wemizimba ebonakalayo kumgangatho okanye owusebenzisayo. Zininzi izizathu zoku, phakathi kwazo kukuba umzimba we linga sharira okanye umzimba we-astral udibene nomzimba wenyama, ngentambo okanye umbilical, lo gama ukungafi okanye umzimba kaYesu ungadibananga. Umzimba we-linga sharira okanye i-astral yomzimba ophakathi awungobukrelekrele, lo gama uYesu okanye umzimba ongafiyo ungafaniyo kuphela kwaye wahlukile emzimbeni wenyama, kodwa unobulumko kwaye unamandla kwaye uyazi kwaye unobukrelekrele. Ayikuyeki ukuphulukana nengqondo, nokuba nekhefu ebomini okanye ebomini ukuya ebomini okanye umsantsa kwimemori. Iinkqubo eziyimfuneko zokuba nobomi kunye nokufumana ukuzalwa kwesibini zihamba kunye nemigca kunye nemigaqo ye-zodiac, kodwa iinkcukacha zide kakhulu kwaye azinakunikwa apha.